“मलाई ‘त्यस्ती’ केटी नसोच्नु ल” - Kendrabindu Nepal Online News
“मलाई ‘त्यस्ती’ केटी नसोच्नु ल”
सुरुमै म स्पष्ट पार्न चाहान्छु ‘सबै महिला ‘त्यस्ता’ हुदैनन ।’ यो ‘त्यस्ता’ भन्ने शब्द महिलाहरुबाट नै सापटी लिईएको हो। “मलाई ‘त्यस्ती’ नसोच्नु है” भनेर महिलाहरुले आफ्नो बचाउमा दिने जवाफले ‘त्यस्ती’ प्रकारका महिला कस्ता होलान् कुन रुपरंग अथवा भावभंगीमा भएका होलान भनेर सोच्न बाध्य बनाउछ कहिलेकाँही। सधैं हासोमजाक गरिरहने साथीले नै पनि कहिलेकाँही मलाइ ‘त्यस्ती’ नसोच्नु है भन्ने जवाफ दिन्छन ।
दुबईमा फेरी अर्की “त्यस्ती” नेपाली महिलाले पिटाई खाएकी छिन् । बुझ्ने या नबुझ्ने हरुले ति महिला नै “त्यस्तै” भएको तर्क गरिरहेछन।गाडी भित्रै सुपरभाइजर बाट कुटिएकी ति महिलाको बारेमा बिभिन्न टिका टिप्पणीहरु भईरहेछन । सामाजीक संजालमा पिडित महिलाको पक्ष बिपक्षमा तर्क बितर्कहरु ब्यक्त गरिएका छन्। कोही ति महिला अन्यायमा परेको भनेर पिट्ने पुरुष सुपरभाइजरको बिरोध गरिरहेछन भने कोही ति महिलाले तथानाम गाली गर्दा सुपरभाइजर आवेशमा आएर हात उठेको जिकिर गरिरहेछन।
कुरा र तर्कना जस्तासुकै भएपनि युएईको कानुन अनुसार कसैमाथि हातपात गर्नु गैह्रकानुनी कुरा हो। हातपात गर्नेलाई कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ नै त्यसमा बिबाद गर्नपर्ने पनि केहि देखिदैन। त्यसमाथि महिलामाथि भएको हातपातलाइ त्यहाँको कानुनले कसरी हेर्छ त्यो बेग्लै पाटो भयो।
भलै बंगलादेश, भारत, पाकीस्थान लगायत देशमा
ठूलाठूला बेश्यालयहरु होलान तर तिनै देशका
नागरीकहरु नेपाली चेलीलाई चरित्रहिन देख्छन् ।
देह ब्यापारी ठान्छन् । एकादुई प्रतिनिधी घटना
हरुलाई लिएर उनीहरुले नेपाली महिलाहरु प्रति
त्यस किसिमको मनस्थिती बनाएका छन्।
मुख्य मुद्दा भनेको त्यसरी हातपात किन भयो भन्ने हो । एकजना वलिष्ठ पुरुषले निरिह महिलामाथि बीच बाटोमा गाडी रोकेर थप्पड हान्न पर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो त्यो कुरा भने गम्भीर भएर मनन गर्न पर्ने देखिन्छ।
सुपरभाइजर स्तरमा काम गर्ने दक्षिण भारतीय ति पुरुष आम मजदुर होइनन। आम मजदुरलाइ काममा लगाउने नाइके भएको नाताले उनी अन्य कामदार भन्दा बढी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने सिलसिलामा यो घटनामा भने उनी चुकेका छन्। नियम या कानुनको कुरा गर्ने हो भने मादक पदार्थ सेवन गरेर काम गर्न आएकी ति महिलालाई उनले तुरुन्तै प्रहरी बोलाएर जिम्मा लगाउनु पर्थ्यो । तर कानुन र ब्यबहार फरक कुरा हुन्। कम्पनी संचालन गर्न र मजदुरहरुलाई मिलाएर काममा लगाउन कानुनका दफा भन्दा व्यवहारिकताका तरिकाहरु बढी प्रभावकारी हुन्छन् ।
मदिराको नसामा लठ्ठिएकी ति नेपाली महिलालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको भए सुपरभाइजरको तत्कालको समस्या समाधान हुन्थ्यो होला तर ति महिलालाई जेलबाट छुटाउने जिम्मेवारी कम्पनीले लिनुपर्थ्यो । कम्पनीले नछुटाए हप्तौंसम्म उनले जेलमा बस्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। अथवा जरिवाना तोकिएको खण्डमा पनि त्यो भुक्तान गर्ने काम कम्पनीकै दायित्व हुन आउथ्यो। भलै पछि उनको तलब बाट काटिने किन नहोस। यो प्रकृया कम्पनीको लागि आवश्यक टाउको दुखेको बिषय हुन जान्थ्यो। त्यसैले ति सुपरभाइजरले त्यहि गरे जुन उनको बिबेकले तत्कालिन रुपमा सजिलो देखे।
बाटोमा पुगेपछि महिला नसाको प्रभावमा अनावश्यक बोल्न थालिन् । सायद सहन नसक्ने किसिमका गालीहरु पो निकालिन कि मुखबाट । फलस्वरूप ति पुरुषले आफ्नो संयमता गुमाउन पुगे र गाडी रोकेर महिला माथि कुटपिट गरे। लामो समय खाडीमा बिताएका ति अधेड उमेरका दक्षिण भारतीय पुरुष युएईको कानुनबारे अनभिज्ञ पक्कै थिएनन। फेरि पनि उनले कानुन मिचे र महिलामाथि हातपात गरे।
भिडियोमा उनले हातपात गरेको दृश्य हेरिरहदा एक दुइ थप्पड पछाडी उनले हानेका हरेक थप्पडले त्यो दृश्य हेर्ने मान्छेलाई दु:खी बनाउछ। यति धेरै किन पिटेको होला भन्ने प्रश्न मनमा उब्जिन्छ। तर आवेशको कुरा हो। उनी भित्र कुन दानवत्व जन्मीयो र उनले त्यसरी क्रुर ब्यबहार देखाए त्यसको कारण के थियो त्यो कि त उनै जानुन या उनीसंग झगडा गर्ने ति नेपाली महिलाले जानेकी होलिन् । यो भन्दा दु:खद कुरा त केही नेपालीहरुले ति पुरुषमाथि हातपात गरे जसको कारण झन्डै एक दर्जन नेपालीहरुले जागीर समेत गुमाउन पुगे ।
आखिर ति महिला पिटिएको दृश्य नेपाली नियोगसम्म पुग्यो र दुतावासको पहलमा उपचार खर्च र थोरै क्षतिपुर्ति दिएर ति महिलालाई नेपाल फर्काउने निर्णय गरियो। निकै बेफाइदा गर्यो यौटा सानो घटनाले। क्षतिपुर्ति र उपचार खर्च पाएपछि पिडित महिलाले न्याय पाएको जस्तो देखियो होला तर सबै भन्दा बेफाइदा तिनै महिलालाई हुन गयो । उनले जागिर समेत गुमाउन पुगिन। सुरक्षित् रुपमा नेपाल फर्काइएको भनेर कसैले भनेपनि उनको जागिरमै उनको भविष्य सुरक्षित् थियो । यो कुरा पनि बिर्सिनु हुदैन। गल्तिको सुरुवात उनैबाट भएको कारण पिडित पनि उनै र बढी मर्कामा पनि उनै पर्न पुगिन।
जे घटना भयो त्यो निन्दनीय छ। त्यसो कदापि हुन हुदैनथ्यो। एकजना निरिह नेपाली चेलीले बिदेशी पुरुषको हातबाट कुटिनु पर्दाको क्षण साह्रै दयनीय हुने रहेछ। कारण जे सुकै भएपनि कारण खोतल्न भन्दा अगाडि मुखबाट “कठै” “च्व च्व”निस्कने रहेछ। यो भन्दा बाहेक अरु गर्न नै के सकियो र।
खाडीमा कार्यरत महिलाहरुको प्रकृतीलाई नजिकबाट नियाल्दा सबै खाडीमा कार्यरत महिलाहरुलाई ‘त्यस्ती’ भएको आरोप लगाउनु गलत हुन जान्छ । आजसम्म मैले खाडीमा कार्यरत महिला हरुको सकारात्मक पक्षमा धेरै नै आलेखहरु लेखेको छु । उनीहरुको हिम्मतको कदर गरेको छु। उनीहरुको मेहनत र परिश्रमको सम्मान गरेको छु। तर अवस्था सधैं एकनास नहुने रहेछ। केही प्रतिशत महिलाले गरेका निकृष्ट कामको कारण सिंगो नेपाली महिला समुदाय अपमानित हुनुपरेका दृष्टान्तहरु देख्दा भने ‘त्यस्ता’ महिलाको बारेमा सकारात्मक चर्चा गरेर के पाईयो त आखिर भन्ने बिचार चाहिं मनमा पलाउने रहेछ ।
युएईको घटनालाई लिएरै पनि “नेपालमा पान पसलमा समेत रक्सि पाइने र हरेक महिला पुरुषले घर घरै रक्सि बनाएर पिउने चलन भएको” ठोकुवा गरे एकजना बिदेशी मित्रले मसंग। मैले त्यसो होइन त्यसो हुदैन भन्दा त्यहि भिडियो देखाएर “ल हेर खाडीमा आएर पनि नेपालीहरु बदलिन सकेका छैनन्” भनेर प्रमाणित गर्न खोजे। भईपरी आएको एक दुर्घटनाले कसरि सिंगै समाज र समुदायलाई लपेट्छ भन्ने बुझ्न यो भन्दा अन्त जानु आवस्यक देखिन मैले।
समुद्र किनारमा बसेर यौन सम्पर्कको विषयमा पैसाको वार्गेनीनङ गरिरहेकी एकजना नेपाली चेली संग समय बिताउन गफिदै गरेको बिदेशी साथीले भोलिपल्ट सुनाउछ नेपालीहरु यौनको बारेमा धेरै उदार हुन्छन यो उनीहरुको संस्कृति नै हो ? तेरो गाउ समाज पनि त्यस्तै छ? उसले गरेका प्रश्नहरु मेरो कानमा घन झैं बज्रन्छन । मसंग उसलाई दिने कुनै जवाफ हुदैन किनकी त्यसरी वार्गेनिंग गर्ने युवतीले उसको दिमागमा भरिदिएको फोहोर मेरो सानो स्पष्टिकरणले पखाल्न सक्दैन । त्यसो होइन तिमीसंग भेटिएकी युवती “त्यस्ती” हुन् होला भनेर पन्छिन खोज्छु म। खाना खाने बेला मेरो मित्रले फेरि त्यहि कुरा निकाल्छ। यो बेलामा भने मैले त्यो युवती म जस्तै वाहियात कुरा सुन्न परिरहेको र आवेशमा आउने कुनै नेपाली दाजुभाइको नजिक पर्दा उसको झापड खाईन् भने त्यो बेलामा मैले कसको पक्ष लिनु पर्ला भनेर तर्कना गरिरहेको छु ।
मलहरुमा भेटेर एक दुइ सय रियलको सपीङ गराएर त्यहीं त्यो रातको ग्राहक तय गर्ने, फोन संवादमा अपरिचीतहरु संग समेत रिचार्ज कार्डको लागि अनुरोध गर्ने । रात रातभर अश्लिल वार्तालाप गरेर समय बर्वाद गर्ने । केहि रकमको लागि आफ्नो यथार्थ भुलेर केहि नेपाली चेली हरुले गर्ने गरेका ‘त्यस्ता’ कृयाकलापहरुले नेपाली प्रतिको विदेशीहरुको दृष्टीकोण ब्यापक रुपमा फोहोर भएको छ जसलाई पखाल्न र वास्तविक नेपालीको चरित्र संग परिचित गराउन असम्भव जस्तै हुदै गईरहेको छ।
विदेश आईपुगेको जोसुकैलाई यथासक्य चाडो धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने रहर हुन्छ नै। अधिकांश महिलाहरु चरम अभावको कारणले नै खाडीमा काम गर्न आएको कुरामा समेत दुइमत छैन। त्यस किसिमको अभावबाट मुक्ति पाउनको लागि धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने लक्ष राख्नु लाइ मैले नराम्रो कदापि भन्दिन। आफ्नो शरीरको आफूखुशी प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई पनि मैले नाजायज भन्दिन। कोही देहव्यापार गरेर धन जोड्न चाहान्छ भने यो उसको निजि मामला हो। त्यस्तो तरिका अपनाउन चाहनेलाई कानुनले नियन्त्रण गर्ला तर हामी जस्ता मान्छेले उनीहरुको स्वतन्त्रतामा खलल पर्ने गरि बोल्नु आवस्यक पनि हुदैन ।
आफ्नो सुरक्षित भविष्यको लागि आफ्नै बिबेक प्रयोग गरेर गरिएका निर्णयहरु निर्णयकर्ताको हितमै हुन्छन होला। त्यस किसिमका कुराहरुमा हस्तक्षेप् गर्ने नैतिक अधिकार कसैलाई हुदैन पनि। तर जे सुकै गरेर जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लागेका महिलाहरु गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने सम्भावनाले भने आम नेपालीलाइ दुःखी बनाउने रहेछ ।
युएईमा मदिराले मातिएकी महिला त्यस्तै चरित्रहीन हुन् भनेर मैले आरोप लगाउदिन। किनकि मदिरापान उनले अन्य कुनै किसिमका तनावहरुको कारणले पो गरेकी थिईन कि ? उनीभित्र अन्य कुनै गम्भीर मानशिक समस्या भएको र त्यसबाट पार पाउने उपाय स्वरूप उनले मदिरापान पो गरेकी थिईन कि ! यी प्रश्नहरु एकातिर थाँती राखेर उनको चरित्रको बारेमा बिष्लेषण गर्नु न्यायोचित नहोला । बरु त्यसदिन उनिमाथि हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना भने टरेको देखिन्छ। वलात्कार जन्य अपराध हुने त्यस्तै अवस्थामा त हो । उनलाई फकाई फुल्याई प्रलोभनमा पारेर अथवा जवर्जस्ती उनीमाथि त्यस किसिमको अपराध हुन पुगेको भए अवस्था झन् भयावह हुन्थ्यो।
मदिरापानलाई स्वच्छन्दता अथवा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मानेर हेर्दा देह ब्यापार या पैसा कमाउने अन्य उपायहरुलाई पनि त्यसरी नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अन्तर्गत नै राखिनु पर्छ। कसैले कसैको काममा बाधा पुर्याउन पाउदैन र सुझाव दिनु पनि उचित होला जस्तो लाग्दैन । तर हरेक महिला अथवा पुरुष जोसुकैले पनि आफुले गरेको क्रियाकलापले कस्तो संदेश दिएको छ भन्ने बिषयमा सोच्नु आवस्यक देखिन्छ।
आफ्नो समाज, समुदाय र देश नै मुछिने क्रियाकलापहरु गर्दा गोपनियता अपनाउनु पर्छ। सिङ्गै मेरो देश नै मै जस्तो हो भनेर गलत संदेश दिनु भन्दा मेरो अवस्था ‘त्यस्तो’ हो म ‘त्यस्ती’ हुनु मेरो वाध्यता हो तर मेरो देशको संस्कृति फरक हो भन्ने जानकारी गराएरै आफूखुसी आफ्नो देहको प्रयोग गरेर पैसा कमाउनु उचित हुन्छ । बोल्दा ‘म त्यस्ती केटी होइन” भन्न पनि नछाड्ने र सिङ्गै नेपाली महिला समुदायको बदनाम हुने क्रियाकलाप गर्ने महिलाहरुको कारण खाडीमा नेपाल बदनाम हुदै गईरहेको छ ।